အဆိုပါရေကြောင်း PROLOGY ကို UPDATE လုပ်နည်း - ရေကြောင်း - 2019
အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုစကင်နာများအတွက်အထူးဆော့ဖ်ဝဲကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာရှာဖွေ program ကို, ဒါပေမယ့်လည်းမောင်းသူကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့မသာတပ်ဆင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာကွန်ပျူတာ device ကိုချိတ်ဆက်မှုအတွက်လိုအပ်ပေသည်။
Epson စုံလင် 1270 Scanner များအတွက်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ခြင်း
အဆိုပါယာဉ်မောင်းကိုတပ်ဆင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ အများဆုံးသင့်လျော်သောနည်းလမ်းရွေးဖို့, သင်ပထမဦးဆုံးအလုံးကိုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာရပေမည်။ ထို့ကြောင့်ဤဆောင်းပါးတွင်ငါတို့သည် Epson စုံလင် 1270 ဘို့ထိုကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲတပ်ဆင်မှုအတွက် options အမျိုးမျိုးကိုဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။
တှေ့မွငျရအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်ထုတ်လုပ်သူ - သူကိရိယာများအတွက်ယာဉ်မောင်းရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကမည်သည့်အသုံးပြုသူမှလုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ option ကိုအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လုံခြုံ, ငါတို့သည် Epson က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူစတင်ပါဒါကြောင့်ပါပဲ။
အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ် Epson သွားပါ။
အဆိုပါဦးထုပ် site ကိုဖြစ်ပါတယ် "ယာဉ်မောင်းများနှင့်ပံ့ပိုးမှု"။ ကျနော်တို့တစ်ခုတည်းကလစ်လုပ်နေတာ။
ထို့အပွငျမိတ်ဆက်ပေးဖို့ကပိုမြန်လွယ်ကူစေရန် "ပြီးပြည့်စုံတဲ့ 1270" ရှာဖွေရေး box ထဲမှာ။ ထိုအခါစာနယ်ဇင်း "ရှာရန်"။ ဆိုက်ကိုကျနော်တို့ကကားမောင်းသူကို download လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ရှိရာကိရိယာကိုရှာဖွေပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာမျက်နှာပိုင်ဆိုင်တယ်။
အင်တာနက်ကပေါ်တယ်ကိုမေတ္တာရပ်ခံနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အရာများထဲမှတစ်ခုတည်းကိရိယာပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ထိုနောက်မှငါတို့သည်စာမျက်နှာကင်နာသွားပါ။ ဒီနေရာတွင်အပိုင်းကိုဖွင့ ်. ရန်လိုအပ်ပါတယ် "ယာဉ်မောင်း, utilities" ကာ operating system ကို select လုပ်ပါ။
ဒီအဆင့်မှာက site ပေါ်တွင်ယာဉ်မောင်းကိုရှာဖွေလည်ပတ်မှုစနစ်၏လတ်တလောဗားရှင်းဖော်ပြခြင်းမပင် Windows7ကိုဘို့, မဖြစ်နိုင်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။
သက်ဆိုင်ရာ Operating System ကိုရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက်သင် software ကို install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ရက်စွဲတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ လတ်တလော download လုပ်ပါ။
အမျိုးမျိုးသောဖိုင်များတစ်ဖိုင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း။ ကျနော်တို့ extension ကို EXE ရှိပါတယ်သောတဦးတည်းအတွက်သာစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။
installation သငျသညျကိုသာ button ကိုနှိပ်ထားဖို့လိုရှိရာကွိုဆိုမျက်နှာပြင်နှင့်အတူစတင် "Next ကို".
သငျသညျလိုင်စင်သဘောတူညီချက်ဖတ်ရှုဖို့သတိပေးခံရလိမ့်မည်။ ညာဘက်အရပျ၌တစ်ဦးကို tick ထားရွေးချယ်ဖို့အလုံအလောက် "Next ကို".
သာထို့နောက်ယာဉ်မောင်းကို install စတင်ပါ။ အဆိုပါ utility ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်အလုပ်ကိုပြီးစီးမှုအတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်မှုလိုအပ်သည်တစ်ခုတည်းသောအရာ, ဒီက Windows ၏ထံမှတောင်းဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းများ "Install".
တပ်ဆင်ပြည့်စုံသောအခါ, ငါတို့ကထပ်မံအရေးယူပြောပါတယ်ရှိရာပြတင်းပေါက်မြင်လိမ့်မည်။ ရုံစာနယ်ဇင်း "ပြီးပြီ".
ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်နည်းလမ်းအဆုံးသတ်သည်။ သငျသညျကို Windows 7, ဒါမှမဟုတ် operating system ကိုတစ်ဦးပိုမိုခေတ်မီဗားရှင်းရှိပါကကျနော်တို့ကင်နာ Epson စုံလင် 1270 ဘို့အောက်ပါယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်နည်းလမ်းများသုံးစွဲဖို့အကြံပြုအပ်ပါသည်။
Method ကို 2: တတိယပါတီအစီအစဉ်ကို
အင်တာနက်ကိုတွင်အသုံးပြုသူများသည်သူတို့တွင်အချို့လူကြိုက်များပျော်မွေ့ပရိုဂရမ်၏ပဒေသာရှိပါတယ်။ ထိုသို့သော applications များတစ်ဦးချင်းစီယာဉ်မောင်းစစ်ဆေးခြင်း, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စနစ်ကစကင်ဖတ်စစ်ဆေး, ပြီးတော့တစ်ဦးချင်းစီ device ကိုနှင့်၎င်း၏ဆော့ဖ်ဝဲအသေးစိတ်အစီရင်ခံစာပြသပါ။ အနည်းငယ်ကလစ်နှင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားပါလိမ့်မည်လတ်တလော software ကိုအောင်လုံလောက်ပေ။ သင်တို့သည်ဤအများ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းကိုမသိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏သူတို့ကိုအကြောင်းကိုဆောင်းပါး, ဘယ်မှာအားလုံးအသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖတ်ပါ။
အသိအမှတ်ပြု၏အသုံးပြုသူများသည်တို့တွင်ခေါင်းဆောင် program ကို DriverPack Solution ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်းများထဲမှသင့်ရဲ့ device ကိုများအတွက် software ကိုရှာတွေ့နိုင်အောင်ကြီးမားသည်, ကအရေးမပါဘူး, ကအဟောင်းနှင့်အများဆုံးခေတ်သစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ရွေ interface နဲ့ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများနိမ့်ဆုံး - ထုတ်ကုန်၏ရှင်းလင်းသောအားသာချက်များကြောင့်အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူများအတွက်မကြာခဏအလုံအလောက်မဟုတျပါဘူး။ အကြောင်းမူကား, အဆိုပါပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုဖို့ဘယ်လိုပေါ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်အဘို့အသငျသညျအောကျဖျောပွဟိုက်ပါလင့်ခ်ကိုသွားပါရှိရပါမည်။
သင်ခန်းစာကိုဘယ်လိုသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ယာဉ်မောင်းကို update လုပ်ဖို့, DriverPack Solution နှင့်အတူ
Method ကို 3: ID ကို device ကို
တစ်ခုချင်းစီကို device ကိုတစ်မူထူးခြားသောအရေအတွက်ကရှိပါတယ်။ သူက Third-party အစီအစဉ်များနှင့် utilities မရှိဘဲညာဖက်မောင်းသူကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူသောသဘောအသုံးပြုသူကူညီပေးသည်။ ကိုယ်ကသာအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်အထူးက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအလည်အပတ်ခရီးလိုအပ်သည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းလမ်းဖြင့်, တစ်ဦးစကင်နာ Epson စုံလင် 1270 ID ကိုဖြစ်ပါသည်:
USB မှတ် VID_04B8 & PID_0120
ထိုသို့သောနည်းလမ်း, အလုံအလောက်သော်လည်းရိုးရှင်းပေမယ့်ပိုကောင်းပိုပြီးဖြည့်ဆည်းပေးသောတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာဖို့အထူးဆောင်းပါးလည်းမရှိ။
Method ကို 4: အဆိုပါ standard Windows ကိရိယာတွေ
အဆိုပါ Scanner ယာဉ်မောင်း Epson စုံလင် 1270 ကို Install လုပ်ခြင်းက်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်ခြင်းမရှိဘဲတတ်နိုင်သမျှဖြစ်ပါသည်, utilities ကို download လုပ်ပါ, ဆော့ဖ်ဝဲတပ်ဆင်။ အဆိုပါ Windows ကို operating system ကိုသင်လျင်မြန်စွာလိုချင်သော device ကိုတွေ့ပါကများအတွက် software ကို install လုပ်ခွင့်ပြုပါအထူး tools တွေရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်မှာရှိသမျှလိုအပ်သောအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်စရာရှိသောကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းမှအပြည့်အဝညွှန်ကြားချက်ပေးပါသဘောမျိုးလုပ်မထားဘူး။
ရလဒ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ယခုအချိန်တွင်သက်ဆိုင်ရာများမှာသမျှသောအလုပ်လုပ်နည်းလမ်းများဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖြေကိုရဖို့သေချာသောမှတ်ချက်များ, ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်လျှင်သင်, သင့်မေးခွန်းများကိုချန်ထားနိုင်ပါတယ်။